Umaka: maxcdn | Martech Zone
Amawebhusayithi ahamba kancane athonya amazinga we-bounce, amazinga wokuguqulwa, kanye namazinga akho wenjini yokusesha. Lokho kusho, ngiyamangala ngenani lamasayithi aqhubeka kancane ngokudabukisayo. U-Adam ungikhombise isayithi namuhla elibanjwe kuGoDaddy ebelithatha ngaphezu kwemizuzwana eyi-10 ukulayisha. Lowo mpofu ucabanga ukuthi bonga izizumbulu ekusingatheni… esikhundleni salokho balahlekelwa amathani emali ngoba abazoba ngamakhasimende abo bayayikhokhela. Sikukhulise ukufundwa kwethu impela
Qaphela: Selokhu sabhala lokhu, selokhu sathuthela eFlywheel ngenethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe enikwe amandla yiStackPath CDN, i-CDN eshesha kakhulu kune-Amazon. Ngaphandle kokuthi use-premium, ipulatifomu yokubamba amabhizinisi, kunzima ukwenza ukusebenza kwebhizinisi nge-CMS efana ne-WordPress. Ukwabiwa kwemithwalo, izipele, ukudilizwa, ukuphindaphinda, nokulethwa kokuqukethwe akuzi kushibhile. Abamele abaningi be-IT babheka amapulatifomu afana neWordPress futhi bawasebenzise ngoba bakhululekile. Mahhala isihlobo, noma kunjalo. Faka i-WordPress ku